Abantwana bafumana ubomi bemihla ngemihla ngeefowuni kunye nefowuni yedoli
IiDollho kunye nefowuni yefowuni
Ifenitshala yeDoloph iphinde ikhuthaze izakhono zolwimi ngokusebenzisa imidlalo yokudlala indima
Ifenitshala yeedolesi ifana nobomi bemihla ngemihla
Ifenitshala yedololi ifanelekile kumagumbi amaninzi abantwana. Ngefenitshala yefowuni abantwana banokudala umhlaba wabo womdlalo. Kodwa ngaba ifenitshala yedoli nayo ifanelekile njengemidlalo yokudlala?
Ifowuni yeDolk - sebenzisa ubomi bemihla ngemihla
Impendulo apha icacile "ewe" - nangeendlela ezininzi.
I-Dollhouse kunye nefowuni yefowuni
Abantwana bafunda emdlalweni ngokuya kwiindima ezithile kunye nokuziphatha okungaphezulu okanye ngaphantsi kokuziphatha kwangaphambili.
Ifenitshala yeedolesi, njengoko ungathenga kwiindawo ezininzi zokuthengisa izitoni, yenza izimo ezigqibeleleyo zokuphinda uphinde uphile ngobomi bomntu omdala.
Ifenitshala yeedolesi inika umntwana ingcamango ecacileyo, eyenza ifane nesimo apho abantwana bakhunjuzwa khona "ubomi obufanelekileyo". Oku kuthetha ukuba abantwana bayashukunyiswa yifenitshala yedoli ukuze babuye baphinde baphendule iziphatho ezigcinwe ngabazali babo.
Ngenxa yoko, kukho umphumo wokufunda kabini
Okokuqala, abantwana baxelisa indlela yokuziphatha yabantu abadala kule ndawo. Oku kuthetha ukuba ifenitshala yeefowuni yabantwana ibenza bakwazi ukwenza imisebenzi ethile yemihla ngemihla kwaye ngaphezu kwayo yonke into ukuze bafumane intsingiselo emva kwabo. Ngokuqinisekileyo unokuzama ukuchazela umntwana ukuba kutheni i-toy ihlala kwiikhabhinethi okanye kutheni isinkwa sifakwa kwi-oven.
Kuphela xa umntwana unako, nokuba ukuxelisa ezi zenzo phantse eqinisekisa ukuba nako oko ngokwenene ukuqonda ukuba umama okanye utata uziphethe ngale ndlela ethile. Ukuxeliswa kwexesha elidlulileyo ibalulekileyo ekufundeni iipatheni zentlalo. Ngamafutshane: ngefenitshala yedolophu, umntwana unikezelwa kwindawo yokuqeqesha apho banokwenza khona kwaye baqeqeshe ubomi babo bemihla ngemihla.
Oku kuya kubangela kwisibini, into ebalulekileyo. Ingavakala ingavamile, kodwa ifenitshala yododo ingaba luncedo kakhulu kulwimi lokufumana umntwana. Isiqalo sokuqala apha kwakhona ukuba ifenitshala yenodoli yakha indawo efana neyona nto abazali abayenza ngayo. Ewe, ukuziphatha kwabazali kufuna ukuba bathethe.
Umntwana uzuza kwaye uphucule izakhono zolwimi ngokuxelisa abazali. Njengokuba sele kuchaziwe, ifenitshala yododo idala ngqo le ndawo apho abantwana bashukunyiswa khona ukuba baphinde benze ukuziphatha kwabazali ngokubanzi. Ukuba umntwana wakho udlala needodoli zakhe kule ndawo, kuya kuthetha izinto ezifanayo okanye ezifanayo ozenzayo.
Kusuka kwinqanaba leembono, omnye unokuthi apha, umntwana wakho uzalisa izenzo zakho zokuthetha kwiimeko ezifanelekileyo zokusetyenziswa. Inkqubo yomntwana ukusebenzisa izivakalisi ezithile kunye namazwi ngokuchanekileyo. Kwaye oko kunceda umntwana ukuba aqonde intsingiselo yeengongoma ezingcono.
Puppenmöbel Ukukhuthaza uphuhliso umntwana nje yokuba kukho wezokusingqongileyo efanisiweyo kuni, apho abantwana, ezinxulumene nazo, uyakwazi ukuqhuba ukuziphatha ngokolwimi nokuziphatha ekuhlaleni. Nangona kunjalo, akukho ndawo ngokwaneleyo kuzo zonke iindiza zokumisa ifenitshala enye okanye ngaphezulu.
Abo nangoku abafuni ukwenza ngaphandle kuyo ukuba yindawo yoqeqesho badlale yaye benza nokuziphatha ekuhlaleni ukunika abantwana zayo, ungakwazi ukufikelela nemiphumo efanayo a dollhouse. Kulo dodo, umntwana wakho uya kufumana indawo efanelekileyo yokubuyisela amava. Kwakhona, umntwana wakho unokuxelisa kwaye asebenzise ukuziphatha kwezentlalo kwiimeko ezichanileyo.